DHAGEYSO Wasaarada waxbarashada Soomaaliya oo war ka soo saartay dugsiyada magacyada carabiga ah leh. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO Wasaarada waxbarashada Soomaaliya oo war ka soo saartay dugsiyada magacyada carabiga ah leh.
Wareegto ka soo baxday xafiiska wasiirka wasaarada Tacliinta dowlada fedraalka Soomaaliya C/laahi Goodax Bari ayaa lagu sheegay in cidkasta oo gacanta ku haysa dugsi laga doonayo inay dib ugu soo celiyaan magacii dugsigaas loo aqoon jiray wixii ka horeeyay sanadkii 1990-kii xiligaas oo dowladii dhexe ee Soomaaliya ay meesha ka baxday.
Wasiir goodax ayaa xusay in dugsiyada loo bixiyay magacyada afka carabiga ay dhibaato weyn ku qabaan caruurta waxka dhigata islamarkaana la iska hilmaamay magacyadii dadkii hal doorka u ahaa umada Soomaaliyeed,wuxuuna wasiirku xusay in sida ay aaminsan yihiin qaar ka mid ah maamulayaasha dugsiyadaa ay diin ahaan ugala jeedaan magaca Carabiga ah ee dugsiga loo bixinayo.
C/laahi Goodax Bari wasiirka waxbarashada dowlada Soomaaliya ayaa sheegay in qorshaha taaba galinta iyo sare u qaadida tayada waxbarashada dalka Soomaaliya ayagoo ka duulayo ay dowlada maalinta arbacada ee todobaadkaan ay kula wareegayso in kabadan 20 dugsi oo isugu jira hoose dhexe iyo sare kuwaasoo iyo ardayda waxka barto uu gaaraya 15 kun oo arday ah.
Wasiirka wasaarada waxbarashada Soomaaliya C/laahi goodax Bare ayaa dhanka kale xusay inay wasaaradiisu diirada saarayso sare u qaadida iskuulada farsamada gacanta si ay u daboolaan baahiyo badan oo xiligaan ay dadka soomaaliyeed u qabaan.
← Askari ks tirsan ciidamada Puntland oo maanta lagu dilay magaalada Boosaaso.
Canshuurta uu Maraykanka saaray ganacsiyada shiinaha oo maanta dhaqangashay →